Umaki: ukuzibandakanya kwezokuxhumana | Martech Zone
Umaka: ukuzibandakanya kwezokuxhumana nabantu
Ungayandisa Kanjani Ukuzibandakanya Komphakathi
ULwesithathu, April 18, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Sisanda kwabelana nge-infographic ne-athikili echaze izinyathelo eziyisishiyagalombili zokuqalisa isu lakho lezokuxhumana. Abaningi benu sebevele baqalisile isu lakho lezokuxhumana kepha kungenzeka bangaboni ukubandakanyeka okuningi njengoba ubulindele. Okunye kwalokhu kungahle kube ukuhlunga ama-algorithms ngaphakathi kwezingxenyekazi. I-Facebook, ngokwesibonelo, kungakuhle ukhokhe ukukhuthaza okuqukethwe kwakho kunokukukhombisa ngokusobala kunoma ngubani olandela umkhiqizo wakho. Konke kuqala, kunjalo,
Uhlelo Lokumaketha Komphakathi Olunezinyathelo Ezi-6 Ezilula
NgoLwesihlanu, Septhemba 1, 2017 NgoLwesine, Agasti 31, 2017 Douglas Karr
Imithombo yezokuxhumana iyaqhubeka nokuthuthuka njengethuluzi lokuxhumana, ukulalela, ukushicilela, ukuxhasa, nokuphromotha amabhizinisi. Ukukhangiswa kwemithombo yezokuxhumana kuyaqhubekela phambili, kunikeza izindlela eziningi nokuqondiswa okuthuthukile okwehlisa izindleko ngokuzibandakanya ngakunye. Amapulatifomu wokulalela, ukuphendula, ukushicilela, ukukala, nokwenza imikhankaso ayasungulwa futhi aqhubeka nokuhlinzeka ngamabhizinisi amakhulu. Njengoba inqwaba yezinkundla zokuxhumana seyitholakala, kulula ukudideka noma ungaqiniseki ngokuthi ungathuthukisa kanjani
Ama-39% amabhizinisi awalandeleli imikhankaso yawo yezenhlalo futhi kuholela emathubeni alahlekile. Ngizokukhombisa ukuthi ungawalandelela kanjani kahle ama-hashtag ngesikhathi semicimbi, nezindlela ongazisebenzisa ukwakha umkhankaso ofinyelela kabanzi. Ngizogxila ezintweni ezimbili: Amamethrikhi abalulekile okufanele ulungele ukuwalinganisa uma wenza umkhankaso we-hashtag Amasu alula ongawasebenzisa ukwenza ukufinyelela okubanzi Amamethrikhi Womkhankaso Wenhlalo Obalulekile Imikhankaso eminingi yezenhlalo yakhelwe
NgoLwesine, Februwari 25, 2016 ULwesihlanu, February 26, 2016 Douglas Karr
I-Reach7 ifuna ukwenza kube lula kubantu ngabanye nakwamabhizinisi ukuthi bandise ukufinyelela kwabo kwezenhlalo emhlabeni wonke. NgeReach7, abasebenzisi bakhomba futhi bahlanganyele nezithameli ezifanele kakhulu kwimidiya yezenhlalo kalula nangendlela efanele. Ipulatifomu yabo isiza abasebenzisi ukwakha izithameli ezifanele emakethe yabo yasendaweni noma basebenze ngempumelelo ukuzibandakanya nemakethe yomhlaba. Amabhizinisi noma abantu ngabanye bangathola ama-tweets ngezilimi ezingaphezu kwezingu-80 ezikhulunywa kakhulu emhlabeni. Ukuhumusha okungu-90% kuqediwe